Car — Steemit
Waymo ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များ၎င်း၏ဒုတိယအဓိကထုတ်လုပ်သူမှမိတ်ဖက်များနှင့်မကြာသေးမီကစိစစ်အောက်မှာလာသောအခြေတည်နည်းပညာများအတွက်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုအပေါ် Jaguar ကို Land Rover အတူတက် teaming ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအညီလက်အောက်တွင်ဗျည်းအက္ခရာ Inc ကိုရဲ့ Waymo, Jaguar ရဲ့ငါ-ခြေလှမ်းလျှပ်စစ် SUVs သို့ Tata Motors Ltd ၏ဇိမ်ခံယူနစ်ကနေပထမဦးဆုံး All-လျှပ်စစ်ပူဇျောသက်ကာယင်း၏ Self-မောင်းနှင်သည့်စနစ်ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် Waymo ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ 20000 နေရာစီစဉ်ထားဆိုပါတယ် I- 2020 2018. ခုနှစ်စမ်းသပ်မှုများအဘို့အလမ်းအပေါ်အရှိန်အဟုန်မော်တော်ယာဉ်များသည်မော်တော်ယာဉ်များယခုနှစ်စတင် ထား.
Waymo ရဲ့စီးနင်း-တစ်ရပ်တက္ကစီဝန်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လာမယ့်မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏တံခါးသော့ကိုရှုထောင့်တစ်ဦး fit," ဆရာယောဟနျ Krafcik, Waymo ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, အင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ရုံစီးနင်းဘို့ပဲညာဘက်ကိုကားတစ်စီးလာပြီပိုမိုနီးကပ်စွာရနိုင်တယ်။
Waymo, ကစီးပွားဖြစ်စီးနင်း-မိုးသီးဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်ပြင်ဆင်အဖြစ်က၎င်း၏ဦးဆောင်အားကောင်းပိုမိုကားတစ်စီးကုမ္ပဏီများနှင့်လုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်ဘဏ္ဍာရေးသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်မပြုခဲ့ပေမယ့် Waymo $ 69.500 များအတွက်ရောင်းသောငါ-ခြေလှမ်းမော်တော်ယာဉ်များ, ဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေသည်။ ဒါကထက်ပို $ 1.3 ဘီလီယံမှာသဘောတူညီမှုများအတွက် Waymo ရဲ့ငွေပေးချေမှုနေရာလိမ့်မယ်။ Uber Technologies က Inc ကိုကနေတစ်ဦးက Self-ကားမောင်းကားတစ်စီးစက်မှုလုပ်ငန်းအံ့အားနှင့်ပွင့်လင်းလမ်းများပေါ်တွင်နည်းပညာရဲ့စွမ်းရည်အကြောင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံချွတ်ကန်သောလူကူးပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, hit နှင့်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ စနေနေ့တွင်, Krafcik သူ Waymo ရဲ့နည်းပညာကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုကိုရှောင်ရှားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ နှစ်ပေါင်းအဓိကမော်တော်ကားပိုးပနျးပွီးနောကျ, Waymo, ယခင် Google က Self-ကားမောင်းစီမံကိန်း 2016 Waymo အတွက် Fiat ဟာ Chrysler မော်တော်ကားများ NV နှင့်အတူ၎င်း၏ပထမဆုံးသဘောတူညီ
မှုထို့နောက်၎င်း၏စမ်းသပ်မှုမြို့ကြီးများအတွက် Chrysler Pacifica မီနီဗန်အပါအဝင်တပ်ဖြန့်နှင့်, ဇန်နဝါရီလ, က "ထောင်ပေါင်းများစွာဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုဆိုသည်လက်မှတ်ရေးထိုး "ရှေ့က၎င်း၏စီးပွားရေးအရတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုပွဲဦးထွက်၏မော်တော်ယာဉ်များ၏။ အဆိုပါ Pacficas ကဲ့သို့ Jaguar ကိုမော်တော်ယာဉ်များသည်, Waymo လိုဂိုကိုဘွားနှင့်၎င်း၏လာမယ့်စီး-မိုးသီးကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး Krafcik Jaguar ကိုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးအစုရှယ်ယာရှိကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။ "ဒါဟာတကယ့်ပူးပေါင်းဖွင့်," Krafcik ကဆိုသည်။ "သင်၏ရှုထောင့်ရှေ့ကိုသွားတွေ့လိမ့်မည်။ " စက်တင်ဘာလမှာတော့ Bloomberg သတင်းဌာနက Jaguar ကို Land Rover လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုစနစ်များကိုထုတ်လှိမ့်ရန်၎င်း၏အားထုတ်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ကြောင်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝယ်ယူမှုအလေးချိန်ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဇွန်လထဲမှာ, ကားထုတ်လုပ်သူကဧပြီလပိတ်ထားတဲ့ရန်ပုံငွေပတ်ပတ်လည်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Lyft Inc ကိုအတွက် $ 25 သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ-ကားမောင်းနည်းပညာအပေါ် Lyft အတူလုပ်ကိုင်င့်နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကို-based startup ရဲ့ယာဉ်မောင်းမှငှားယာဉ်များပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ Waymo လည်း Lyft အတူလက်တွဲကြေညာခဲ့သည်။
Waymo kopine aotehkyaote hkwin r mawtaw yarinmyarr ၎inneat dutiy aadhik htotelotesuu mha matehpaat myarr nhaint makyaarsayymek hcihcait aoutmhar larsaw aahkyay tai naeepanyar myarraatwat kyeemarrsaw toetaatmhuaapaw Jaguar ko Land Rover aatuutaat teaming hpyitpartaal . aasoparanye laataouttwin byaeeaakhkarar Inc korae Waymo, Jaguar rae ngar- hkyaylhamshuthcait SUVs shoet Tata Motors Ltd eat jainhkan yuunait k nay pahtam usone All- shuthcait puu jyaww saat karyainneat Self- maunggnhain saeet hcanait paungghcaut par lainmaal Waymo k kopine aotehkyaote hkwinr 20000 nayrar hcehcainhtarrsopartaal I- 2020 2018. hkunhait hcamsautmhu myarrabhhoetalam aapaw aasheinaahone mawtaw yarinmyarr sai mawtaw yarinmyarr yahkunhaithcatain htarr. Waymo rae hceenainn- taitraut takkahce waansaungmhu eat aahcateaapine taithkuhpyit larpar lain maal . " darhar kyawantawthoet ko t k ae kyawwathcararkaunggtae lar m ae mawtaw yarin hpyithkyinn taat aasonesaat nhaint kyawanotethoeteat hceepwarrrayylotengaann aahceaahcain eat tanhkarr sot ko shu htaw int tait u fit," sarar yaw hanya Krafcik, Waymo rae aamhusaungaararshihkyaote, aaintarbyauutwin pyawwkyarrhkaesai . " kyanawthoet k puggol tait u mayttarrauthkan hkaesai rone hceenainn bhhoet pell nyarbhaat ko karrtaithcee larpye pomo neekauthcwar r ninetaal . " lammyarr pawtwin aamyarrsone kopine aotehkyaote hkwin r hcamsaut mine aahti hparohparellsaeet Waymo, k hceepwarrhpyit hceenainn- moesee waansaungmhu hcatainraan pyinsain aahpyit k ၎inneat u saung aarrkaungg pomo karrtaithcee kumpanemyarr nhaint lotekine hphoet hcateaarr htaat saan sai . aasopar kumpanemyarr sai bhandarrayy saatmhaathkyetmyarr ko htotehpaw m pyuhkaepaymaae Waymo $ 69.500 myarraatwat raungg saw ngar- hkyaylham mawtaw yarinmyarr, waalyuuraan hcehcain naysai . dark htaatpo $ 1.3 bheleyan mhar sabhawtuunyemhumyarraatwat Waymo rae ngwaypayy hkyaaymhu nayrar lain maal . Uber Technologies k Inc ko k nay tait uk Self- karrmaungg karrtaithcee hcaatmhulotengaann aanaarr nhaint pw int lainn lammyarr pawtwin naeepanyar rae hcwmrai aakyaungg swaynway ngyinn hkone hkyawat kaan saw luu kuupyee hkae saeet aapaatk, hit nhaint say sone hkaerasai . hcanaynaetwin, Krafcik suu Waymo rae naeepanyar ko lay yarin pyetkyamhu ko shawin sharr kya lain maallhoet yonekyipartaal hpyithkaesai husosai . nhaitpaungg aadhik mawtawkarr poe panya pwee naw kya, Waymo, yahkain Google k Self- karrmaungghcemankein 2016 Waymo aatwat Fiat har Chrysler mawtawkarrmyarr NV nhaint aatuu ၎inneat pahtamasone sabhawtuunyemhu hthoetnout ၎inneat hcamsautmhu myahoetkyeemyarraatwat Chrysler Pacifica me ne baan aaparaawain taut hpya ant nhaint, jaannawarrel, k " htaungpaunggmyarrhcwar waalyuu hkaesai husosailaatmhaatrayyhtoe " shaek ၎inneat hceepwarrrayyaar takkahce waansaungmhu pwal u htwat eat mawtaw yarin myarreat . aasopar Pacficas kaeshoet Jaguar ko mawtaw yarinmyarr sai, Waymo logo ko bhwarr nhaint ၎inneat lar m ae hcee- moesee kwanyaat eat aahcateaapine hpyit lim mai . shoet syawwlanyya Krafcik Jaguar ko sabhawtuunyehkyet aatwat bhandarrayy aahcushalyar shikyaungg aahkineaamar pyawwsopartaal . " darhar t k y puupaungg hpw int," Krafcik k sosai . " saineat shu htaw int shae ko swarr twae lain mai . " hcaattainbharlamhartot Bloomberg satainnhtarnak Jaguar ko Land Rover shuthcait mawtaw yarinmyarr nhaint kopine aotehkyaote hkwin r maunggnhainmhu hcanaitmyarr ko htote lhai m raan ၎inneat aarrhtotemhu myaha int tainraan ninekyaungg naeepanyar kumpanetway rae waalyuumhu aalayyhkyane hkae satainnhtotepyanhkaesai . jwanl htellmhar, karr htotelotesuu k epyel patehtarrtae raanponengway paat paatlai eat taithcatetaitpineaahpyit Lyft Inc koaatwat $ 25 saann rainnnhaeemyahuutnhaan hkaesai husosai . aasopar kumpane kolaee kopine aotehkyaote hkwin r- karrmaungg naeepanyaraapaw Lyft aatuu lotekine int nhaint saanhparaanhcahchcako-based startup rae yarin maungg mha nghar yarinmyarr puujaw par lain maal hupyawwsai . Waymo laee Lyft aatuulaattwal kyay nyar hkaesai .
Selamat @goldbloger-3! Sudah gabung di Steemit. Suka melihat anda bergabung.. sudah upvote ya.. 😁
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by goldbloger-3 from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.